Vaovao - Manampy ny sehatra fiampangana an'i Evergrande Xingluo ny NEWYEA
Ny NEWYEA dia manampy ny sehatra famahanana an'i Evergrande Xingluo
Ny NEWYEA dia manampy an'i Evergrande Xingluo mameno sehatra, mizara ny zavatra niainany tamin'ny fananganana gara any Xiamen sy Changsha, ary miresaka hevitra vaovao momba ny fampandrosoana
Ankehitriny, rehefa miady amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo orinasam-piarakodia ireo orinasa mpiavosa, ny Evergrande Group, izay iray amin'ireo orinasa 500 manerantany, dia mivelatra amin'ny sehatry ny fiara vaovao. Vao tsy ela akory izay, notontosain'ny Evergrande Charging Technology Co., Ltd., ny fampivoarana ireo orinasam-pamokarana win-micro miaraka amin'ny lohahevitra "fiantsonan'ny 10.000 valiny misokatra sy win-win", ao Nanjing, Xi'an, Xiamen, Changsha, Baoding sy ny hafa toerana.
Mpitantana ny departemantam-panjakana maro mifandraika amin'ny indostrian'ny fiara, mpandraharaha mpampihatra vola mahazatra, ary koa ny solontenan'ny orinasa madinidinika mikasa ny hanangana tobim-piantsonana amin'ny tanàna manodidina ny tranokala no nivory mba hifanakalo hevitra sy fifanakalozana lalina momba ny fampiasam-bola amin'ny fananganana sy fiasan'ny gara fiampangana.
NEWYEA Teknolojia, amin'ny maha-rafitra fampandrosoana an-tariby mialoha ny finday sy tariby fampandehanana fiara, famokarana ary fiasan'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra, ho toy ny mpandraharaha mpamokatra paompy mitambatra. Nasaina ihany koa aho hanatrika ny fivoriana fifanakalozana any Xiamen sy Changsha.
Raha ny zava-misy, ny teknolojia NEWYEA dia nirotsaka lalina tamin'ny sehatry ny famandrihana manan-tsaina nandritra ny taona maro. Izy io dia tsy vitan'ny hoe manana vokatra mpamokatra paompy manan-talenta amin'ny indostria, fa manana ihany koa vahaolana amin'ny raharaham-barotra matotra sy miovaova, izay afaka mampifanaraka ny fomba serivisy fiaraha-miasa mifanandrify indrindra ho an'ny mpanjifa. Ankehitriny, ny NEWYEA dia nampiroborobo ny fampiasam-bola, ny fananganana ary ny fampandehanana ny fotodrafitrasa manerana ny firenena amin'ny alàlan'ny fananganana fiaraha-miombon'antoka amin'ireo orinasa matanjaka manerana ny firenena.
Hatramin'izao, NEWYEA dia nanangana orinasa iaraha-miasa 6, tanàna misy tetikasa 20 mahery. Hatsarao hatrany ny fampivoarana azy ireo avy amin'ny fitaovana, lampihazo, fiasa, serivisy, drafitra ary fandaminana, izay afaka manome antoka tsara kalitao ho an'ny fampandrosoana mandresy ny orinasa sy ny mpiara-miombon'antoka rehetra.
Teo amin'ny sehatry ny fivoriana fifanakalozana, ny mpitarika sy ny manampahaizana mandray anjara dia nanazava tamim-pitandremana ny politikan'ny indostria sy ny firoboroboan'ny fampandrosoana, ny fananganana gara sy ny traikefa amin'ny fizarana izay nozarain'ireo mpanamboatra fotodrafitrasa sy mpiasan'ny sehatra, ny fifanakalozana marina, mahomby ary manome aingam-panahy, ary nanoritra mazava ny goavana sehatry ny fampandrosoana ny indostrian'ny famandrihana.
Ny sehatra Xingluo fiampangana natombok'i Evergrande dia natao indrindra hanampiana ireo orinasa kely sy bitika izay miara-miasa amin'ny toby fiasana hanome fitaovana fitantanana feno sy matihanina, ary hanome serivisy namboarina amin'ny fisafidianana ny antontam-bato, ny seha-pihariana, ny varotra herinaratra ary ny herinaratra ho an'ny fananganana ny gara. Amin'ny alàlan'ny "one-stop" hamahana ireo teboka fanaintainana hamoronana ekolojia misokatra, ary hifandray amin'ireo sehatra fifamoivoizana rehetra, mba hanatsarana ny fahombiazan'ny asa amin'ny ankapobeny, fa koa hamahana ny "kilometatra farany" fitetezam-paritry ny angovo vaovao.
Na ho an'ny haitao NEWYEA sy i Evergrande Xingluo izay mamaly an'i Tong, ity fivoriana fifanakalozana ity dia nahatonga fahatakarana bebe kokoa teo amin'ny roa tonta. Evergrande Xingoxtong dia afaka manome sehatra misokatra ho an'ny fiaraha-miasa mandresy fandresena ho an'ny NEWYEAs, manampy ireo orinasa manatanteraka ny fananganana sy ny fiasan'ny tobim-piantsenana amin'ny vidiny ambany sy amin'ny fahombiazana bebe kokoa, ary koa mametraka fototra mafy orina ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny ho avy eo amin'ny orinasa roa tonta.